Ministry Invites Tender Application for Karaweik Palace | Myanmar Business Today
HomeBusinessMinistry Invites Tender Application for Karaweik Palace
Ministry Invites Tender Application for Karaweik Palace
အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်
Written by Linn Thit
Ministry of Hotels and Tourism has invited tender applications for iconic Karawaike Palace and 3.5 acres of land in Kandawgyi Lake in Yangon.
The Karaweik Palace and the land were leased to Zakabar Company Limited in 1999 for 20 years. The palace’s rental agreement is set to end in August 2020. Thus, the ministry is looking for bidders.
Any interested investors can submit the application until July 8, according to the tender invitation published in the state-owned media.
Zakabar Company Limited holds the permit to operate Kandawgyi Park, which encompasses Karaweik Palance and its land, at the annual rental fee of K30 million, which Yangon Regional Auditor General’s 2014-2015 fiscal year report pointed out being too low. Then, the rental fee was doubled to K60 million per year in 2015.
Since the company has not failed to pay the annual fees for the palace, it is also eligible to bid in the tender. However, the company claimed that paragraph7of the contract allows the company to seekafive-year extension of the rent for two times.
Designed by the renowned architect U Ngwe Hlaing, in the style ofaroyal barge, the design includes the traditional Pann Sel Myo, the ten ﬂower arts and crafts of Myanmar. The unique Karaweik mythical bird design has attracted visitors to its culture show and restaurant from near and far since its opening in June 1974.
Translated into English by Min Thu Aung
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးကရဝိတ်ခန်းမနှင့် မြေသုံးဧကခွဲအား ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါနေရာကို ယခင်ကဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီအား နှစ်(၂၀)သက်တမ်းဖြင့် ငှားရမ်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနဘက်က ငှားရမ်းသက်တမ်းနှစ်(၂၀)ပြည့်သွားသောကြောင့် ထပ်မံငှားရမ်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို ဇွန်လ(၈)ရက်တွင် စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါပိတ်ရက်ကို ဇူလိုင်(၈)ရက်သတ်မှတ်ထားကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ကြေညာထားသည်။
ယခုတင်ဒါဖိတ်ခေါ်မှုတွင် ဝန်ကြီးဌာနက ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်မည်သူမဆို ရယူလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၂၅ဧကကျယ်ဝန်းသော ကန်တော်ကြီးကရဝိတ်ဥယျာဉ်ကမ္ဘာသည် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက တစ်နှစ်လျှင် ငှားရမ်းခကျပ်သိန်း(၃၀၀)ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး ယင်းပမာဏသည် နိုင်ငံတော်အတွက် နစ်နာကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၄-၁၅ဘဏ္ဍာနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းမြေနေရာဌားရမ်းမှုကို ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်သိန်း(၆၀၀)သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီဌားရမ်းမှုစာချုပ်သည် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleThailand to consider reopening more businesses as virus appears contained
Next articleUsers in3Cities Can Pay Electricity Bills via Mobile Banking in July